आखिर बुढ्यौलीमा बुवाआमा किन बोझ लाग्छन् ? » KhabarPati.net
चितुवा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेश मृत्यु #डोरमणि पौडेल # वाग्मती प्रदेश Pooja Sharma
आखिर बुढ्यौलीमा बुवाआमा किन बोझ लाग्छन् ?
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार १२:५५ प्रकाशित
भनिन्छ, सानो छँदा बच्चालाई आफ्नो आमाबुवा नै संसार हो भन्ने लाग्छ । मेरो बुवाआमा नै सबैभन्दा धनी, शक्तिशाली, मायालु, जान्नेबुझ्ने हो भन्ने ठान्छन् ।उनीहरु बुवाआमाकै काखमा लपेटिएर बस्छन् । दुःखमा, पीडामा, वेदनामा आमाबुवाको न्यानो र भरपर्दो साथ खोज्छन् । बुवाको छाती र आमाको काखमा लुटपुटिनु पाउँदा उनीहरुलाई सबैभन्दा सुरक्षित महसुष हुन्छ ।आमाको काख र बुवाको काँधमा चढेर उनीहरु हुर्किन्छन् । क्रमस जान्ने–बुझ्ने हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरुलाई आफ्नो आमाबुवा मात्र सबैथोक होइन भन्ने लाग्न थाल्छ । विस्तारै आमाबुवासँग दुरी बढ्दै जान्छ ।उनीहरु हुर्कदै जान्छन् र बुवाआमाको साहारा बिना हिँडडुल गर्न सक्ने हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरु लेखपढ गर्छन् । आयआर्जनको काममा लाग्छन् ।
प्रेम गर्छन्, विवाह गर्छन्, बालबच्चा जन्मन्छन् । यतिबेला आमाबुवाको उमेर भने ढल्कदो अवस्थामा हुन्छ । उनीहरु दिनदिनै कमजोर र शिथिल हुँदै गएका हुन्छन् ।अब छोराछोरीको भरमा उनीहरुले बाँच्नुपर्ने हुन्छ । खानपान र स्यहारसुसारका लागि छोराछोरीमा निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला छोराछोरीलाई लाग्न थाल्छ, ‘मेरा बुवाआमा कमजोर हुन ।’बुवाआमाको शरीरलाई बुढ्यौलीले थिच्छ । उनीहरु राम्ररी हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । राम्ररी खान सक्दैनन् । राम्ररी सुत्न सक्दैनन् । शरीरमा आइपर्ने रोगहरुबाट बच्न औषधि खानुपर्ने अवस्था हुन्छ । यतिबेला छोराछोरीलाई लाग्छ, ‘मेरा बुवाआमा एकदमै कमजोर र परनिर्भर छन् ।’
छोराछोरी आफ्नै संसारमा रमाउन थाल्छन् । खाने, खेल्ने, घुम्ने, मनोरञ्जन गर्ने । नाम, प्रतिष्ठा कमाउने । यतिबेलासम्म उनीहरुको पारिवारिक जीवन सुरु भइसकेको हुन्छ । आफ्ना छोराछोरी, नातेदार, इष्टमित्र, साथीभाईसँग समय बिताउन थाल्छन् । अब उनीहरुलाई आफ्नो आमाबुवा बोझ लाग्न थाल्छ ।पाको भइसकेका आमाबुवासँग भलाकुसारी गर्ने मुड हुन्न । उनीहरुसँग समय बिताउने फुर्सद हुन्न । उनीहरुलाई डुलाउने, घुमाउने कुरामा जाँगर चल्दैन ।बुवााआमासँग त अब कुनै रहर र आकंक्षा बाँकी छैन । उनीहरुलाई आफ्नो लागि केही गर्नुछैन । आफुले जीवनभर आर्जन गरेको अनुभव, ज्ञान सन्ततीलाई सुनाउन र बुझाउन चाहन्छन् । तर, छोरा–नातीले उनीहरुको कुरा सुन्न रुचाउँदैनन् । बुढापाको कुरा उनीहरुलाई झर्को लाग्छ ।
छोराछोरीले जतिसुकै अपहेलना गरेपनि बुवाआमा सधै छोराछोरीको भलो सोचिरहेका हुन्छन् । उनीहरु आफ्ना सन्ततीको सुख र खुसीकै खातिर आफ्नो पीडा लुकाइरहेका हुन्छन् ।तर, छोराछोरीले आमाबुवाको मर्म बुझ्दैनन् । बुवाआमालाई स्यहारसुसार गर्दा, औषधि उपचार गर्दा आफ्नो समय बर्बाद भएको ठान्छन् । अन्ततः बुवाआमालाई बृछाश्रममा पु¥याएर छाड्छन् ।सबै छोराछोरी यस्ता निर्दयी हुँदैनन् । तर, हाम्रो समाजमा कतिपय छोराछोरीले बुढापाका आमाबुवालाई बोझ मान्ने गर्छन् र उनीहरुलाई अपहेलित गरिरहेका हुन्छन् ।यतिबेला उनीहरुले सोच्दैनन् कि, म पनि एक दिन बुढो हुनेछु । मेरो पनि हातखुट्टा र इन्द्रियले राम्ररी काम गर्नेछैन । खाना रुच्नेछैन, निद्रा लाग्ने छैन । त्यसबेला औषधि खाएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थितीमा मेरा छोराछोरीले पनि मलाई हेला गरेमा के होला ?
२०१९ सालसम्म थियो चुच्चे नक्सा, कसले बेच्यो देश ?
यस्ता ठाउँ जहाँ मुसा पाल्न सरकारको अनुमति चाहिन्छ, मार्न र बेच्न प्रतिबन्ध छ
अपराध बोध र ग्लानीबाट कसरी मुक्त हुने ? र यसका लक्षणहरु के के हुन् ?
कौशिक नवराजको कथासङ्ग्रह ‘डियर एक्स’ सार्वजनिक
चर्चित ब्यान्ड द गोर्खाज”ले ल्यायो महामारीले गीतको भिडियो” जताततै चर्चा .
१. Rainstorm knocks down radio and television towers in Surkhet
२. Malaysia orders migrant workers with their visas expiring to return home
३. COVID-19 death toll in Brazil climbs to 9, 146
४. Tiger mauls local representative in Bardiya
५. Banks, financial institutes to provide full services from today
१. Genera Tempo per apprezzamento con eHarmony nel tuo Smartwatch
२. Date A Cougar Evaluation nel 2019
३. आज लक्ष्मी पूजा : धन र समृद्धिको कामनासहित पूजाआजा गरिँदै
४. स्वादिलो र पौष्टिकताले भरिपूर्ण ”निगुरो”
५. रुबसकाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ शुरु भयो
YOUTUBE CHANNAL : SUBSCRIBE NOW
अनामनगर-२३ , काठमाडाैँ
९८१०५८२७४२ / ९८६९६६५६२५
Copyright ©2021 KhabarPati.net | All rights Reserved.